‘किसानको आय वृद्धि नै समृद्धिको आधार’ – NewsAgro
‘किसानको आय वृद्धि नै समृद्धिको आधार’
July 9, 2015 NewsAgro0Comments Agriculture, Chiranjibi Nepal, Nepal, Newsagro.com, गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल Governer Dr, नेपाल राष्ट्र बैंक Nepal Rastra Bank
काठमाडौं, २४ असार / नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले साना किसानको आय बढाएर मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको बताएका छन् । अहिले पनि अधिकांश नेपाली कृषिमै आश्रित रहेकाले उनीहरूको जीवनस्तर माथि नउठीकन आर्थिक वृद्धि सम्भव नभएको उनले बताए । सानाकिसान विकास बैंकको १४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले यस्तो बताएका हुन् ।
किसानको आय वृद्धिमा साना किसान विकास बैंकको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । इजरायली राजदूतावाससँगको सहकार्यमा साना किसान विकास बैंकले नेपाली विद्यार्थीलाई इजरायलमा कृषि तालिमका लागि पठाउँदै आएको छ । यो तालिमले नेपाली कृषिमा आधुनिकीकरण भित्रिएको गभर्नर डा. नेपालले बताए । ०७२ साल जेठ मसान्तमा ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कुल सम्पत्ति रहेको यो बैंैकले आव ०७०-७१ मा ११ करोड ४१ लाख खुद नाफा गरेको छ । यस्तै, चालू आवको ९ महिनामा ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ ।
०७२ जेठ सम्ममा ३ सय १२ हजार महिला र १ सय २५ हजार पुरुष सदस्य गरी ४ लाख ३८ हजार घरपरिवार सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । ४ सय १२ साना किसान कृषि सहकारी संस्था तथा ८३ समान प्रकृतिका अन्य सहकारी संस्थासमेत गरी कुल ४ सय ९५ सहकारी संस्था यस बैंकमा आबद्ध रहेका छन् । बैंकले आफूसँग आबद्ध संस्थालाई सुरुदेखि ०७२ जेठसम्ममा २५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी गरी १७ अर्ब ६४ करोड असुली गरिसकेको छ । सोही अवधिमा बैंकको लगानीमा रहेको ऋण ७ अर्ब ९९ करोड छ ।
← हाते ट्‍याक्टर प्रयोगमा आकर्षण
अझै सुल्झिएन कृषि विश्वविद्यालयको स्वामित्व विवाद →